टोम यम Info. About. What's This?
ⓘ टोम यम
टोम यम, rtgs: टम yam, थाई: ต้มยำ) एक लाओ र थाई सूप हो, सामान्यतया यो चिंराटसंग पकाइन्छ । टोयम व्यापक रुपममा छिमेकी देशहरूमा जस्तै कम्बोडिया, ब्रुनाई, मलेशिया र सिंगापुर, र बिश्वोका अन्य देशहरूमा यो लोकप्रिय छ।
शाब्दिक रूपमा टोयम बाट व्युत्पन्न भइ दुई थाई शब्दहरू: टोम र यम बनेको हो। "टोम" ले बुझाउँछ उम्लिरहेको प्रक्रिया बुझाउँछ, जबकि "यम" ले एक थाई पिरो र अमिलो सलादलाइ बुझाउँछ । वास्तवमा, टोयम विशेषता यसको तातो र विशिष्ट अमिलो स्वादसंग सुगन्धित मसला र जडीबुटी भरपुर प्रयोगमा शोरबा बनाउनु हो । शोरबा आधारभूत रूपमा ताजा सामग्री जस्तै लेमन ग्रास, काफ्फिर चूना पात, गालागाल, कागति रस, माछा सस, र चोट खुर्सानी बात बनेको हुन्छ ।
व्यापारिक टोयम पेस्ट विभिन्न जडीबुटी सामग्रीको मिश्रण र तेलमा तारेर तयार गरिन्छ । मसला र त्यसपछि अन्य संरक्षण गर्ने बस्तु सामग्री थपिएका हुन्छन। यो पेस्ट बोतल वा प्याकेज गरी संसारभरि बेच्ने गरिन्छ । टोयम को पेस्टसँग स्वादिष्ट ताजा जडिबुटी सामग्री मिलाएर बनेकोले फरक विशेषताहरु हुन सक्छ। यो सूप अक्सर चिकन, मासु, पोर्क, वा झिंगा रूपमा मासुमा समावेश गरिएको हुन्छ ।
यो सन १९९७ मा एसियामा भएको आर्थिक संकट, जो पछि थाईल्याण्डमा शुरूभयो, कहिलेकाहीं यसलाई "टोयम कुंग संकट"का रूपमा उल्लेख गरिन्छ ।
1. चुनिएका केहि प्रकारहरू
टोयम गोंग थाई: ต้มยำกุ้ง
वा टोयम कुंग, यो पकवान को संस्करण सबैभन्दा बढी पर्यटकहरु माझ लोकप्रिय छ, यसमा मुख्य प्राउन राखेर तयार गर्ने गरिन्छ। यो पकवानको उत्पत्ति रट्टानाकोसीन राज्यबाट भएको हो ।
टोयम प्ला थाई: ต้มยำปลา
एक स्पष्ट माछा सूप थियो जो परम्परागत रूपमा भातसंग खाने गरिन्छ । आम पर्यटक थाईल्याण्डमा आउनु पुर्व टोयम धेरै नै व्यापक रूपमा प्रयोग हुने गर्दथ्यो, जसको लागि ताजा माछा लागि क्षेत्रको नदी, नहरहरूमा र ताल मा साथै समुद्र मा लगभग सबैतिर सर्वत्र उपलब्ध छ। सामान्यतया उम्लिरहेको सूप यस प्रकारको लागि उपयुक्त छ पछि माछाको पुरा शरीरलाई रसले फरक पार्दैन ।
टोयम गाइ थाई: ต้มยำไก่
वा टोयम काई सूप को चिकन संस्करण हो ।
टोयम पो टेइक थाई: ต้มยำโป๊ะแตก
वा टोयम थाले थाई: ต้มยำทะเล छ एक फरक प्रकारको सूप जो समुद्री भोजनसंग मिश्रित गरिन्छ जस्तै, प्राउन, व्यंग्य, क्लाम्स र टुक्रा माछा ।
टोयम भियतनाम खोन थाई: ต้มยำน้ำข้น
अझ हालैको एक विविधता छ। लगभग सधैंसँग गरे प्राउन एक मुख्य घटकका रूपमा हुन्छ, एक सानो दूध वा नरिवल दूध थपिएको छ शोरबा एक परिष्करण स्पर्श, र त्यसपछि सन्तुलितसँग केही सुकेको खोर्सानी राखिन्छ । यो मिलाइएको छ जहाँ गालंगा को नरिवल दूध आधारित सूप को मूख्य स्वाद छ टम खो गाइ खोलयो "चिकन गालंगा सूप",सँग भ्रमित गर्न सकिन्छ।
टोयम कुंग माफ्राव मा भियतनाम खोन थाई: ต้มยำมะพร้าวอ่อนน้ำข้น
, एक प्राउन टोयम को संस्करण जो मासु संग, काचो नरिवल र दूध पानी को छिटानरिवलबाट यो निर्माण गरिन्छ ।
टोयम खा मु थाई: ต้มยำขาหมู
सुगुरको खुट्टाको मुसुबाट निर्माण गरिन्छ । यस लाइ पकाउनको लागि लामो समय सम्कम आगोको आवस्यकता हुन्छ । सामान्यतया पराल मशरूम वा सिपी मशरूम - आधुनिक लोकप्रिय संस्करणमा सूप पनि मशरूम समावेश गर्दछ। यो सूप अक्सर ताजा काटिएको धनिया धनिया पातहरु को उदार छिडकावसँग सबै भन्दा माथि छ । सूप अक्सर ताजा कटा हुआ धनिया हरा धनिया के उदार छिड़काव के साथ सबसे ऊपर है। कहिलेकाहीं थाई खुर्सानी जाम भियतनाम phrik phao, थाई: น้ำพริกเผา थपिएको छ: यो सूप एक उज्ज्वल सुन्तला रंग दिन्छ र खुर्सानी स्वाद थप उच्चारण बनाउँछ।
2. अन्य अमिलो र पिरो सूप
थाईल्याण्ड बाहिर कम चिरपरिचित टम खोलंगต้มโคล้ง, एक मसालेदार आमिलो सूप हो, जहाँ आमिलोपन तथापी कागतीको रस को साथै ईमलि को उपयोग को माध्यमबाट पाउन सकिदैन। टोम सोमThai: ต้มส้ม सूप पनि धेरै नै टोयम को समान छ, तर अक्सर लेमन ग्रासवा काफिर चुना को पात लाइ प्रयोग गरिएको हुदैन । टोम सोम को प्रकार मा निर्भर हुने गर्द छ, आमिलो कागती को रस वा इमली को उपयोग ले यो प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
Wikipedia: टोम यम